Omenala Egypt | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Egypt
Egypt ọ bụ ebe njem ọ bụla na-aga. Otu oge na ndụ gị ị ga-ahụ pyramid na ụlọ arụsị ochie ha dị ndụ. All Egypt na-eteta, ruo ọtụtụ narị afọ, akpịrị maka njem na oké osimiri ịmata ihe.
Ma gafee Luxor, Ndagwurugwu Naịl, pyramid ma ọ bụ ili ndị eze ... Kedu ka ị kwesịrị isi kpaa àgwà n'Ijipt? Kedu ndị omenaala ha, omenaala ha ka gbanye mgbọrọgwụ, gịnị bụ ezi ihe ma ọ bụ ihe ọjọọ maka ndị njem nleta ma ọ bụ ndị obodo? Ka ahụ.
2 Omenala Egypt
Egypt dị na ugwu ọwụwa anyanwụ Africa na ọ dị nso na Palestine, Sudan, Libya na Israel. Nwee a ezigbo ihu igwe ma kpọọ nkụ n'oge ọkọchị na udu mmiri na-agafe oke, yabụ ọ bụrụ na ọkụ na-atụ gị ụjọ, ọ kachasị mma ịga n'oge ikpeazụ, nke agbanyeghị, ọ na-adị ọkụ.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bi na ya Mmadụ nde 87 onye imerime ha na-ekwuputa Islam Sunni. Taa na ọtụtụ narị afọ A na-asụ Arabic ebe a Mana tupu ọbịbịa ndị Arab na ala Ijipt, asụsụ ahụ bụ Coptic, sitere na Egypt oge ochie.
Dịka m kwuru, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị Ijipt na-ekwupụta Alakụba na site n'okpukpe ha, ha na-enweta ọtụtụ ọdịnala na ọdịnala ha, site na ihe ekwere na ihe na-abụghị. Iji maa atụ, onye Alakụba ga-ekpe ekpere ugboro ise n’ụbọchị, sọpụrụ Fraịde dịka ụbọchị dị nsọ na otu ọnwa Ramadam ebe ha na-ebu ọnụ ma rụọ ọrụ naanị awa isii n’ụbọchị. Ezinụlọ dị ezigbo mkpa ma otu a ka nsọpuru di, ka a kwanyere okwu ahu ugwu.
Ọha mmadụ dị mkpa ma na-achịkwa ndụ kwa ụbọchị kamakwa ọdịnihu nke onye Ijipt nwere ike inwe. E nyeghị ọnọdụ ezinụlọ nke nnukwu ego, nke dị mkpa, ee, kama ọ bụ n'oge gara aga. Njegharị mmekọrịta mmadụ dị obere, yabụ ezinụlọ ga na-ebukarị ibu karịa ọmụmụ ihe, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Na banyere ebe ụmụ nwanyị nọ n'ọchịchị Ijipt. O doro anya na ọ bụ otu n'ime obodo ndị Arab kacha njọ ịbụ nwanyị na ịbụ nwanyị na-eme njem nleta, ọbụlagodi ma ị soro nwoke.
Mgbe m na-ede banyere omenala mba dị iche iche, achọpụtara m na e nwere ọtụtụ myirịta. Dị ka ndị Korea na ndị Japan Ndị Ijipt weta onyinye mgbe a kpọrọ ha òkù n’ụlọ onye ọzọ (achịcha, chocolate ma ọ bụ candies ma ọ bụghị okooko osisi, n'ihi na ha bara uru karịa maka agbamakwụkwọ na ọrịa). Ọzọkwa ha na-ewepụ akpụkpọ ụkwụ ha tupu ha abanye. Ihe a na - emebu bụ na onye Egypt kpọrọ mmadụ ka ọ bịa n’ụlọ ya ọtụtụ oge tupu onye ahụ anabata ya, ọ bụ ihe a na-ekwu n’ụkpụrụ ya, na mgbe ị nọ n’ebe ahụ toro onye ọbịa gị, ọ ga-abụrịrị ụbọchị.
Ọ bụrụ na enwere ụmụaka n’ezinaụlọ, ọ ga-adị mma iwetara ha ihe ma cheta, A na-eji aka nri ma ọ bụ ha abụọ enye onyinye. Ha na-eri aka ma na-efegharị n’aka nri nakwa na mkparịta ụka na-ekwu maka okpukperechi ma ọ bụ ndọrọndọrọ ọchịchị nwere ike ịda mba, dịka na ụwa ndị ọzọ ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịme oriri ahụ n’udo, dịka a na-ekwukarị. Gịnị banyere mmanya na-aba n'anya? Okpukpe machibidoro ya ma ha enweghị nsogbu na onye na-abụghị onye Alakụba na-a drinkingụ mmanya (na-enweghị ị drunkụbiga mmanya ókè).
N'elu m kwuru na ọ bụghị ezigbo obodo ụmụ nwanyị ka nwanne m nwanyị gwara m na ọ nwetụbeghị mgbe nwoke tụrụ ya ụjọ dịka n'okporo ámá Cairo. Na na ya na di ya nọ! Mmekorita nke ndi nwanyi Egypt adighi nma, ma ọ dịkarịa ala n'okporo ámá, na mgbe ị na-abanye ebe ị ga-akwụ n'ahịrị, ụmụ nwanyị na-aga n'otu ụzọ, ndị nwoke na-aga nke ọzọ.
Ọ baghị uru ikwu nke ahụ Ọ bụrụ na nwanyị ahụ na-eme njem naanị ya, ọ ga-akpachara anya ugboro abụọ n'ọtụtụ ihe: ebe ọ na-eje ije, n'oge ole, ka o si eji ejiji. Na nghọta m, mmachibido iwu kachasị na enweghị isi na-eweta nnukwu ihe egwu… N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịse anwụrụ ihe na-ezighi ezi, ị ga - aka mma iche ugboro abụọ n'ihi na ịchọghị ka ndị uwe ojii jidere gị wee daba Egyptianlọ mkpọrọ ndị Ijipt.
Ndị Ijipt nwere ezigbo ọbịa nke na ha ga na-enye gị kọfị ma ọ bụ tii ma ọ bụ sịga mgbe niile ma ọ kacha mma ịnabata ihe ọ drinksụ drinksụ ahụ ọbụlagodi na ị gaghị a drinkụ ha niile. N'oge mkparịta ụka anya dị mkpa n'ihi na ọ na-ekwu na ịkwụwa aka ọtọ na ezi obi mgbe ụfọdụ mkparịta ụka nwere ike ịkpa ike. N'adịghị ka ndị Asia anyị na-ekwu maka ha, ọ bụ ndị mmadụ otutu aru aru ya mere aka na mmegharị ahụ na-efegharị ebe niile, ọbụnadị na-eti mkpu ma ọ bụ na-akụ na tebụl iji mesie echiche ike.
Na-ekwu okwu banyere okpokoro, mgbe ị nọ ọdụ na ya, ị ga-eche ka onye ọbịa gị kọọrọ gị ebe, ezitela gị n'onwe gị. Cheta, ejiri aka nri were nri mgbe niile, oge niile, ị ga-eto efere ọ bụrụgodị na ị naghị amasị ha. A gaghị ahapụ efere gị ihe tọgbọrọ chakoo maka na ọ bụghị ya, a ga-ejupụta ya oge niile, yabụ ihe kachasị mma iji gosi na ị naghị eri nri ọzọ bụ ịhapụ ihe ebe ahụ, n’ihu anya.
Na-agaghị ezumike kama na njem azụmahịa? Iwu akara otu-nwoke okwukwe aka ọ bụrụkwa na ị bụ nwoke, onye gị na ya na-ekwuchitere ọnụ ya bụ nwanyị, ị ga-eche ka ọ gbasapụ aka ya ka ọ kụja. Ọ bụghị ụzọ ọzọ gburugburu. Ọ bụrụ n’emeghị ya, mgbe ahụ ikenke ekele dị nkenke kwesịrị ya. Ọ bụrụ na ọ maara nke ọma, isusu ọnụ na ntì bụ ihe a na-ahụkarị, mgbe niile n'etiti ndị nwoke na nwoke. Emechaa, ọ bụ ntakịrị mkparị ịgwa onye ọzọ aha, ọkachasị n'okwu azụmahịa, ya mere ọ dị mma iji aha aha.
N'ihe banyere ejiji, n'ozuzu, ndị Ijipt na-agbanwe nnọọ agbanwe n'ihi ya, o zuru ezu iji dị mfe ma mara mma iji mee ka echiche dị mma. N'ime ụmụ nwoke, a na-ahọrọ agba ndị gbara ọchịchịrị, na-enweghị ngwa ngwa, na nke ụmụ nwanyị, uwe dị ọcha kachasị mma, uwe mwụda n'okpuru ikpere na ogologo aka ogologo.
Na nkenke: ọ bụrụ na ị gaa Ijipt sọpụrụ omenala ma cheta na ebe a okpukperechi bụ ihe niile. Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, kpachara anya maka ihe ị na-eme, otu ị si akwa akwa na ebe ị na-eje ije.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Omenala Egypt